Valin-kafatra : mitaky ny fisavana ireo tsimatimanota i Lylison | NewsMada
Valin-kafatra : mitaky ny fisavana ireo tsimatimanota i Lylison
Par Taratra sur 27/05/2016
“Raha nisy fisavana natao tamiko, izay ilay tsikeraiko hoe fitsarana mitanila. Naninona no tsy nosavaina ireo olom-boafidy, tratra nitondra rongony ny fiarany. Ilay minisitra voarohirohy: tsy nisy fisavana. Toy izany ny minisitra, nanodinkodina vola amina miliara…”
Io ny valin-kafatry ny loholona Lylison, tany Mahajanga, omaly, niditra mivantana an-telefaonina tamin’ny haino aman-jery iray. Nahatonga ny fisavana ny tranony ny tsy fahatantesan’ny mpitondra ny teny marina ataony, raha ny nambarany. Raha mbola misy tsy tsy rariny mianjady amin’ny vahoaka: tsy maintsy miteny izy, fa tsy hangina rehefa nahazo toerana.
Nambarany fa tsy nisy ny fanambarana nataony, raha mba nisy fandraisana andraikitra amina fitarainana efa ela. Nambarany ny fitoriana ilay mpandraharaha momba ny fanodinkodinana volam-panjakana, raha mbola minisitry ny Atitany ihany ny praiminisitra tamin’izany.
Eo koa ireo olom-boafidy sy minisitra voarohirohy amina raharahan-drongony…
Tsy tokony hisy ny tsimatimanota
“Tena ampiharo ara-bakiteny tokoa ny teninao hoe tokony tsy hisy tsimatimanota: ny zanaky ny filoha, ny mpanolotsainan’ny filoha, ny mpikamban’ny governemanta”, hoy izy, niantso ny filohan’ny Antenimierandoholona , Rakotomanana Honoré.
Tsy mbola nisy tao amin’ny Antenimierandoholona izany fitondrana vola amina kitapo izany. Ny sasany efa nitondrana vola amin’ny gony: tsy mbola nisy fisavana hatramin’izao, satria miray hina amin’ny ratsy ry zareo.
Tsy manome tsiny ny mpitandro filaminana tamin’ny fisavana ny tranony izy. Baiko ny azy ireo. Manaitra ny manampahaizana eto mba hiteny ny tsy mety izao izy. Tena loza tsy roa aman-tany no mahazo ny tanindrana.